Social Tips Archives - Nhau Dzekusvirana Daily
6 Zvinhu Zvekufunga Kana Uchitsvaga Gweta
Business Business, Social Mazano
Ko ngowani yemubiki yakadii?
Nzvimbo dzakawanda dzebasa dzinoda kupfeka yunifomu yevashandi; izvi zvinosanganisira indasitiri yehutano, indasitiri yebhangi neyemari, indasitiri yekudzivirira, nzvimbo dzekugadzira, ...
Zvinokuvadza Zvazvinoita Pakutumira Mameseji Anonyadzisira
Wakambonzwa nezve izwi rekuti kutumira mameseji ekutumira mameseji? Iyi itsika yakajairika pakati pevechiduku. Kutumirana mameseji anonyadzisira kunosanganisira kuchinjana kwemavhidhiyo, mapikicha,...
by Purity Muriuki 4 ago 3 ago
Social Mazano, Matrix, Social Media
Sei Vepamusoro Vanofurira vari Kukura yavo IG Inotevera Zuva Nezuva
Zuva rega rega, mazana evanhu anoshandisa Instagram. Vachishandisa maakaundi avo e-Instagram, vanogovana mifananidzo nezvehupenyu hwavo, mabhizinesi, uye nharaunda yavanogara....
by Zac 4 ago 4 ago
Maitiro Ekutanga neBitcoin Trading
Bitcoin, mushure mechikamu chemusika wenzombe, yaive nemutengo wakaputsika we60,000. Kumhanya kwenzombe kwakatanga mushure meChivabvu 12 apo BTC hafu yakaitika,...
by SocialNewsDaily 1 gore rakapera 3 ago
Hukama hweMagariro, Social Mazano
4 Vanamuzvinabhizinesi Vachishandisa Social Media Kukurudzira Vamwe
Social media yakashandura zvakanyanya nzira iyo vanhu vanodyidzana nayo uye kugara vachikurukurirana. Sezvo vanhu vazhinji vari kushanda mune imwechete ...
by Zac 1 gore rakapera 3 ago
Social Media, Social Mazano
3 Nzvimbo dzeBhizinesi Rako Kuvandudza Kukurukurirana uye Kubudirira
Kuita bhizinesi munyika nhasi hakusi nyore. Pane makwikwi akawanda kupfuura nakare kose uye kana usiri kuenderana nekuchinja kuri panzvimbo,...
by Zac 2 makore apfuura 3 ago
Matrix, Social Mazano
Kutenda Zvokudya Zvaunogona & Haugone Kudyisa Imbwa Yako
Zvichida kuyedza kupa shamwari yako (s) chikafu chekutenda. Asi, kune madhishi akasiyana-siyana asina kuchengetedzeka kuti imbwa dzidye. Kufanana nesu, canines ...
by Aaron Granger 2 makore apfuura 2 makore apfuura
Kuwanikwa kweWebhu uye Kugovera kune Zvinodiwa zveVateereri Vakakosha
Tese taifanira kutanga pakutanga nemawebhusaiti edu. Sevaridzi vebhizinesi repamhepo, ikodzero yekupfuura. Unogona kunge wakapedza zvakawanda ...
by Zac 2 makore apfuura 2 makore apfuura
Crystalread: Kushambadzira kwepamhepo muZera reNhau Dzekunyepera
Zviitiko zvakawanda nebudiriro zvakakanganisa mashandiro anoita kushambadzira kwepamhepo nhasi, asi zviviri zvacho zvinomira pachena. Chekutanga isarudzo yeFacebook ku...
by SocialNewsDaily 2 makore apfuura 3 ago
famba, Matrix, Social Mazano
7 yeAkanakisa Kuunza Chikafu Mapurogiramu ekutanga Kushandisa Nhasi
Mumakore mashoma apfuura, indasitiri yekuendesa chikafu yakakura zvakanyanya. Nekubatikana kwemabasa emazuva ese, chikafu chinopisa, chinogutsa chinounzwa...
by Zac 2 makore apfuura 3 week ago
Maitiro ekuita Yako Social Media Zvemukati Zvikuru zvakare
(Kwete) nekuda kwenharembozha, kutarisa kwedu kuri kuita kupfupika nekupfupika. Izvi zvakakonzerwa nekuwanda kwezvinhu zviri kugovaniswa...
by Christopher 2 makore apfuura 2 makore apfuura
Kuchengeta Zvishandiso Zvebasa Zvichienderana
Zano rinowanzo kugovaniswa munharaunda yezvishandiso zvevanhu nderekugara uchichengeta resume yako inoenderana. Hauzivi kana iwe...
by SocialNewsDaily 2 makore apfuura 2 makore apfuura